China Abavelisi bokukhupha iDiosgenin kunye nabathengisi | HEX
Ibizwa ngokuba "yigolide yonyango" kwicandelo lezonyango. I-Diosgenin yinto ebalulekileyo ekrwada yokuvelisa iihomoni ze-steroid. Iihomoni ze-Steroid zinamandla okulwa nosulelo, anti-allergies, anti-virus kunye ne-anti-shock anti-effects, lunyango lwe-rheumatism, i-cardiovascular, i-lymphoblastic leukemia, i-encephalitis yeselula, izifo zesikhumba, i-anti-tumor kunye nezigulane ezibalulekileyo zokusetyenziswa okubalulekileyo iziyobisi; Yimpahla eluhlaza yokukhulelwa kwe-Ketenolone Acetate, ebalulekileyo phakathi kweziyobisi ze-steroid iziyobisi. Ingasetyenziselwa ukwenza i-cortisol, prednisone, norethisterone, dermatolysis, dexamethasone, njl.
Egqithileyo Isicatshulwa seRadix Paeoniae Alba
Okulandelayo: Isicatshulwa seCranberry